DOBERMAN PINSCHER DOG FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Alexander (mainty sy harafesina) ary Ember (mena sy harafesina) - faly Doberman Pinschers naka sary ho an'ny fakantsary
Ny Doberman Pinscher dia alika antonony sy matevina vita amin'ny vatana matevina sy hozatra. Lava ny loha ary raha jerena avy eo amin'ny sisiny, dia toy ny kiboriny. Ny tampon-karandohany dia fisaka, ary mivadika ho monja miaraka amina fijanonana kely. Ny lokon'ny orona dia miankina amin'ny lokon'ny alik'ilay alika mainty amin'ny alika mainty, volontany mainty amin'ny alika mena, volondavenona mainty amin'ny alika manga, mena mainty amin'ny alika mena ary mavokely amin'ny alika fotsy. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny lokon'ireo maso miendrika amandy dia loko volontany maro karazana, miankina amin'ny lokon'ny alika. Any Etazonia dia matetika ny sofina no miantsona hijoro mahitsy (tapaka mandritra ny 12 herinandro eo ho eo). Ny sofin'ilay alika kely dia mila fefy mandritra ny roa volana mba hampiorina azy ireo. Betsaka ny mpiompy no manomboka mamela voajanahary amin'ny sofin'ilay alika. Raha avela voajanahary dia mampivelatra ny sofina toy ny hound izy ireo. Matetika ny rambony dia miantsona amin'ny andro 3 andro. Raha tsy voahaingo ny rambony dia maniry ho rambony toy ny vanovava ny rambony. Fanamarihana: tsy manara-dalàna ny mikapoka sofina sy ny rambony amin'ny firenena maro ary manomboka mahita alika maro kokoa miaraka amin'ny faritra mangatsiaka sisa tavela am-pahendrena isika. Mivelatra ny tratra ary mahitsy tsara ny tongotra. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao fohy, mafy sy matevina dia misolelaka. Indraindray misy akanjo ambany fotsy tsy hita maso eo amin'ny hatoka. Ny palitao dia tonga mainty, mainty misy marika marika, manga-fotsy, mena, mena ary fotsy. Rehefa miseho ny marika dia eo ambonin'ny maso tsirairay izy ireo, eo amin'ny molotra, tenda, forechest, tongotra, tongotra ary amin'ny rambony. Misy loko fotsy matevina koa. Raha ny marika fotsy dia heverina ho lesoka amin'ny klioba sasany, amin'ny hafa kosa ekena izy ireo.
Doberman Pinschers dia tena mazoto, mahery fo amin'ny tanjaka sy tanjaka lehibe. Dobes dia te hiaraka amin'ny olony ary tsy mifanaraka amin'ny fiainana an-trano na any an-tokotany ilain'izy ireo ny fifandraisan'ny olombelona sy ny fitarihany. Tsy mivadika, mandefitra, manolo-tena ary be fitiavana amin'ny fianakaviana. Tapa-kevitra, sahy ary mitrikitrika rehefa miasa, dia tena mahay mandanjalanja izy ireo, mahay sy mahay zavatra maro. Manan-tsaina izy ireo ary tena mora hampiofana . Izy ireo dia famantaranandro miavaka ary amboa mpiambina ary tsy mila fiofanana fiarovana fanampiny. Ity karazany ity dia tsy natao ho an'ny rehetra. Ny Doberman dia mila tompona vonona sy afaka mampiseho a fahefana voajanahary amin'ny alika . Ny mpianakavy rehetra dia tsy maintsy hentitra, matoky tena ary tsy miovaova mametraka fitsipika ary mifikitra amin'izy ireo. Mianara mifehy tsara ny alika, satria mety ho lasa mafy loha sy fanahy iniana i Dobermans raha avela hanana ny fombany manokana. Ny zava-drehetra dia tsy maintsy arahin'olombelona. Ny alika no mpanaraka, ary ny ny olombelona no mpitondra . Ny alika dia hankasitraka ny fahalalana ny azy apetraho ao anaty kitapony ary mahatsiaro ho voaro amin'izany. Tokony ho tsara izy ifaneraserana rehefa tanora hisorohana ny tsy fahaizan-doha. Famporisihana ny saina sy fanaovana fanatanjahan-tena isan'andro dia zava-dehibe mba hamoronana Dobe sambatra sy milamina. Ny Doberman dia mila maharitra sy tsy tapaka Ampiofanina . Ny Dobes dia mety ho alika ao amin'ny fianakaviana raha an'ny olombelona ny anjara asan'ny alpha ary raha mahazo fanatanjahan-tena ampy izy ireo, dia efa zatra tsara ary mifanerasera amin'ny ankizy. Na dia manana ny lazany maha-izy azy aza ny Doberman amboa mahery setra , tsy izany fotsiny no izy. Ohatra, i Dobes dia manao alika fitsaboana lehibe. Mipoitra ny olana rehefa mipetraka amin'ny tompona tsy mampiseho ny fitarihana sahaza sy / na tsy manome izy ireo fanatanjahan-tena ampy . Mamy izy ireo ary malemy paika amin'ireo marary any amin'ny trano fitaizana be antitra - ny tippy-toeing mihoatra ny fantsona IV ary mandeha amin'ny hafainganan'ny mponina (izay mety ho miadana be), ary mandritra izany fotoana izany kosa dia hiaro mafy ny tompony raha ilaina izany. Tsy mitovy ny haavon'ny Dominikanina, na dia ao anatin'ny fako sy ny toetran'ny karazany aza dia samy hafa be arakaraka ny fahazoan'ny tompony fihetsika canine ary tena vonona izy ireo handany fotoana hanomezana izay ilain'ny alika voajanahary.
Haavony: Lehilahy 26 - 28 santimetatra (66 - 71cm) Vehivavy 24 - 26 santimetatra (61- 66 cm)
Lanja: 66 - 88 pounds (30 - 40 kg)
hahavony sy lanjan'ny wolfhound Iraniana
Ny 'Warlock' Doberman dia teny iray nomena an'i Dobermans izay lehibe kokoa noho ny habe mahazatra napetraky ny klioban'ny kennel amin'ny karazany.
Mora amin'ny spondylitis vozon-tranonjaza (wobbler Syndrome) noho ny fiarahan'ny hazondamosin'ny tendany sy ny faneriterena ny tadin'ny hazon-damosina azo tratran'ny aretina azo avy amin'ny rà (aretina Von Willebrands) amin'ny fahanterana. Mora voan'ny olana amin'ny hoditra koa, bloat , dysplasia amin'ny valahana ary kilema amin'ny fo miteraka. Ny fototarazo izay mamokatra ny albino (fotsy) Doberman dia voalaza fa ilay fototarazo ihany izay namokatra tigra sy liona fotsy malaza nananan'i Siegfried & Roy tany Las Vegas. Ny sasany mino koa fa ny mason-tany dia fototry ny masking, midika izany fa 'mandray' izy ary misaron-tava ny loko izay mety ho alika hafa. White Dobe fanciers dia nilaza fa tsy misy porofo manamarina fa ity génie ity dia mitondra olana ara-pahasalamana manimba na ratsy izay indraindray mifandraika amin'ny biby fotsy hafa toy ny marenina, fahajambana na saina tsy milamina. Misy ny mpiompy mangataka ny tsy hitovizany, milaza ny fototarazo dia miteraka olana ara-pahasalamana.
Hanao tsara amin'ny trano iray raha toa ka ampiharina tsara, fa ny tsara indrindra amin'ny tokotany salantsalany farafaharatsiny. Dobes dia mangatsiaka be ary tsy alika any ivelany. Izany no antony tsy ahafahan'ny polisy any amin'ny faritra mangatsiaka mampiasa azy.
Ny Doberman dia mazoto be, manana tanjaka lehibe. Mila entina a mandeha isan'andro, mandeha lavitra na jogging, ary mila atao ombelahin-tongony eo anilany na ao ambadiky ny olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny lalana ary ny mpitondra dia tokony ho ny olombelona.
Hatramin'ny 13 taona.
I Dobes dia mila fikarakarana kely ary mpantsaka antonony.
Ity dia karazana fiaviana vao tsy ela akory izay. Izy io dia novolavolaina tany Alemana tamin'ny 1860, azo inoana tamin'ny fiampitana teo amin'ireo mpiandry ondry fohy volo, Pinschers Alemanina , Rottweilers , Beaucerons , Manchester Terriers SY Greyhounds . Ny mpamorona io fangaro io dia mpamory hetra alemana antsoina hoe Louis Dobermann. Dobermann dia tsy maintsy nitety faritra matetika feno bandit, ary nanapa-kevitra ny hamorona mpiambina sy mpiambina afaka mitantana toe-javatra mety hitranga. Ny karazany dia nomena ny anarany avy amin'ny niavian'ilay (nohafohezin'ny iray n). Ny Doberman dia natolotra tamin'ny fampisehoana alika voalohany tamin'ny 1876. Fahombiazana lehibe avy hatrany izany. Ny Doberman dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1908. Doberman Pinschers dia manana talenta maro ao anatin'izany ny fanarahan-dia, mpiambina, fiambenana, asan'ny polisy, asa miaramila, fikarohana sy famonjena, asa fitsaboana, fankatoavana mifaninana ary Schutzhund.
zanak'alika dachshund mainty sy fotsy
'Ity no zanako kely Dobe antsoina hoe Sara. Manga ny lokony. Tena mamy izy. '
Rommel the Doberman Pinscher avy any Aostralia 18 volana— 'Rommel dia mety ho tratra manafika ba kiraro, mandehandeha manodidina ny tokontany ary mizaha amin'ny fefy. Tsy tia afa-tsy ny mandany fotoana amin'ny olona izy ary mampahafantatra anao rehefa te-hilalao kilalao manahirana amin'ny tongotrao izy na handatsaka azy ireo eo am-pofoanao. '
Rocky the Doberman Pinscher alika kely amin'ny 3 volana
Primo the Doberman Pinscher amin'ny faha-18 taonany manao ny raharahany miambina matetika. Tia ny diany isan'andro sy milalao kilalao ankafiziny.
'Saro-kenatra i Deevo the Doberman Pinscher amin'ny faha-9 volana mandra-pahafantany anao, avy eo hitsambikina anao izy. Tiany ny mandeha mitsangantsangana, mihazakazaka manodidina ny morontsiraka, ary milalao amin'ny alikan'ny olon-kafa (tena sariaka). Halany rehefa tsy milalao miaraka aminy intsony izy ireo mba hiala sasatra na hiala sasatra. Indraindray izy no mihady lavaka, mahalana vao mitranga. Mahalana ny hodi-kazo, tsy manandrana mihazakazaka alika hafa mihitsy, mifikitra amiko foana amin'izay alehako manodidina ny trano, tsy miala eo imasoko mihitsy izy. Tsy mahery setra i Doberman hoy ny olona maro, tsy misy alika teraka mahery setra noforonina. '
'Max the Doberman Pinscher avy any Norvezy amin'ny 5 taona sy 72 cm. (28 santimetatra) sy 42 kilao (92 pounds). ' Max dia ohatra an'ny Doberman manana rambony sy sofina voajanahary. Tsy notetehina na nopetahana izy ireo.
Doberman mainty sy mainty mijoro eo akaikin'ny Doberman fotsy - Sary natolotry Jody Franklin
'Ity i Ginger efa ho 3 taona izao. Doberman aody / harafesina izy ary alika mahafinaritra, be fitiavana sy malefaka. Tiany ny milalao miaraka amin'ny zanak'olo-mpianadahy amiko 3 taona sy zana-drahalahiko 1 taona. '
Vera ilay fotsy Doberman Pinscher— 'Ity no Vera malalako. Manomboka matotra izy, ary tsy manao toy ny alika kely. Eo amin'ny sary Vera dia 11 volana. Ny toetrany dia tsara, milalao amin'ny olon-drehetra, fa raha izy mahatsapa fa misy loza ateraky ny fimenomenomana . '
'Titan dia lehilahy mainty hoditra sy mainty hoditra Doberman 3 sy 1/2 taona milanja 101 kilao. Tiany ny milalao fetch at the valan-javaboary orana na mamiratra isa-maraina. Azony atao ny misambotra ny baolina indraindray alohan'ny hianjeran'izy ireo amin'ny tany. Azony atao ny mandray baolina tenisy 3 ao am-bavany indray mandeha. Saika misy baolina na kilalao foana eo am-bavany na fitsakoana amin'ny zavatra. ny ankizy milalao eo amin'ny valan-javaboary tia ny hiompy azy ary tena izy malemy fanahy sy manam-paharetana amin'izy ireo . Tena entin'ny remby izy ary tia mihaza sy manenjika voalavo , squirrels, saka ary fiara fanaraha-maso lavitra. Tsy tiany ny zavatra manidina eny amin'ny rivotra toy ny papango, balaonina rivotra mafana, fiaramanidina fanaraha-maso lavitra ary lehibe kokoa vorona toy ny goaika sy hena . Heveriko fa nahazo ny endriny tsara tamin'ny raibeny izay a aseho alika . Mampalahelo fa maty tany amin'ny DCM ny nenitoany ary maty ny reniny noho izany ary novelomina. Manantena aho fa tsy manana izy ary manana taona maro be miaraka amin'ny zanako lahy aho. '
Jereo ohatra misimisy momba ny Doberman Pinscher
Doberman Pinscher Sary 1
Doberman Pinscher Sary 2
Doberman Pinscher Sary 3
Doberman Pinscher Sary 4
Doberman Pinscher Sary 5
Alika Doberman Pinscher: Sarivongana Vintage azo angonina
fangaro mainty sy tan hound
bulldog amerikana fotsy misy teboka mainty
chihuahua boston terrier mifangaro alika kely amidy
fangaro spaniel poodle sy akoho
chihuahua sy yorkie afangaro alika kely